Playing "Amagugu Pirates" manje ine ukuthandwa okukhulu njengoba lisetshenziswe hhayi kuphela ukuxhumana nomphakathi, kodwa futhi ukulanda izicelo futhi kumadivayisi eselula. Uma wakwazi ukuthola amazinga engaphezu kwenkulungwane, khona-ke unelungelo azibiza pro real. Yiqiniso, ukuze sifinyelele uphawu efanayo, badinga isikhathi esiningi. Ngaphandle ukukhalipha Awukwazi ukwenza lapha. Namuhla sanquma ukukhuluma mayelana nokuthi kungenwa kanjani ezingeni "pirate ngcebo" - 1066. Baningi abadlali wanamathela kuwo.
Empeleni ukudlula alolu akuyona njengoba kunzima, kodwa namanje leyo odinga ukukwazi imithetho eyisisekelo, kungenjalo ngeke eside bakwazi impumelelo kule bhizinisi. Vele namuhla sinqume ukuba embule imfihlo futhi ikutshele ukuthi ukufika ezingeni "pirate ngcebo" - ngo-1066!
Kulesi sigaba, kunezingqinamba ezinkulu eziningana futhi ebaluleke kakhulu kulezi iwebhu. Kancane kancane igcwalisa emangqamuzaneni enkundleni yemidlalo. Into yokuqala nakanjani kudingeka balahle cobwebs, kodwa uma ungangiboni, khona-ke esikhathini esizayo kuyoba sina ungavinjwa.
Ngakho, ake yembula izimfihlo eziyisisekelo futhi uchaze indlela ukuya ezingeni "pirate ngcebo" - 1066. Ukuze unqobe lo esiteji uzokwazi kulelo cala uma bawela izinkanyezi ezimbili, kanye uhlukanise zonke tile efakwe ibhodi game. Ukuze abanye abadlali, umbuzo kudlule kanjani ezingeni "pirate ngcebo" - 1066 kubonakala cishe ixazululwe, kodwa uma wenza into elungile, uzokwazi ukunqoba ngaphandle nobunzima kakhulu. Uma uphatha ukuqeda kuwebhu, kuzomele ngokushesha funa inhlanganisela eyokusiza ukususa zonke chips. Sithemba ukuthi ezilandelayo ngeke kubangele ezifana nobunzima umdlalo "Amagugu Pirates." 1066 ezingeni njengoba pass, siye echazwe ngenhla. Imfihlo isivinini.
Indlela ukubiza ngababusi? Ingabe kubalulekile ukuba igama elithile clan?
Aphambe "Crisis": zonke izindlela ukuze basize kule game
Isu Military: empini ngenxa umdlalo
Lake Ukraine - enye kuzo zonke izilwandle